နည်းပညာ ဖလှယ်ရာ: RSS ဆိုတာဘာလည်း?
RSS ဆိုတာ File တစ်ခုပါပဲ။ သူရဲ့အရှည်ခေါက်က Really Simple Syndication လို့ ခေါ်ပါတယ်။RSS ဆိုတာ သန်းပေါင်းများစွာသော user များက မိမိတို့နှစ်သက်ရာ website များရဲ့ update news များကို စောင့်ကြည့် ဖတ်ရှုသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ user များအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် website များ page များ ဖန်တီး နိုင်တဲ့ web 2.0 စနစ်ပီပြင်လာတဲ့ ယနေ့မှာ RSS စနစ်ဟာလဲ တွင်ကျယ်လာပါတော့တယ်။RSS မှာ အကျဉ်း ချုပ် (summary) မျှသာ ပါဝင်နိုင် သလို အခြား နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံလဲ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီပေါ့ပါးပြီး လျှင်မြန်မှု့ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီး ဒီသတင်း အချက် အလက်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မှု့ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး .ချက်ချင်းဖတ်ရှုသင့်တဲ့ သတင်းအချက် အလက် မျိုးလား ၊ အေးဆေးဆေးဆေးနဲ့ အချိန်ယူပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် မျိုးလား ဆိုတာ လွယ်ကူစွာ ခွဲခြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် RSS feed တစ်ခုမှာ မူလ website များမှ update လုပ်လိုက်တဲ့ သတင်း ခေါင်းစဉ်များ ပါလေ့ရှိပြီ ဒါဟာပဲ မူလ website ရဲ့လင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ RSS Feed တွင် သက်ဆိုရင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနဲ့ ဆက်စပ်ပက်သက်မှု့ ရှိသော အချက်အလက် များကိုလဲ ဖော်ပြပေး သောကြောင့် User များရဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုကို လျှင် မြန်ချောမွေ့စေပြီး အချိန်ကုန် သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ် .။
၃။ Users များအနေနဲ့ မိမိ feed မှာ မည်သည့် website ကို subscribe လုပ်မည်လဲ လွတ်လပ် စွာ ရွေးချယ်နိုင် ခွင့်ရှိပြီး အသုံးမ၀င် မနှစ်သက်ပါက အချိန်မရွေးပြန်လည်ဖြုတ်ချ ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် ။
၄။ ဒီလို up to date သတင်းအချက်အလက်များကို ပုံမှန်ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ website များ တွင် subscribe လုပ်ရာမှာ email လိုအပ်ပေမဲ့ ဒီ Service system က updates များကို deliver လုပ်ရာမှာ သင့်မေးကို အသုံးပြု စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၅။ RSS ရဲ့ Email Subscriptions စနစ်ဟာ သင့်မေး၏ လုံခြုံရေးကို ထိပါးနိုင်တဲ့ spam ဆန် ဆန် မေးများအဖြစ် ၀င်ရောက်လာ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၆။ ဒီ Subscription စနစ်ကိုမကြိုက်နှစ်သက်ပါက update အောက်ဆုံးမှာ unsubscription ပြုလုပ်ရန် စာတစ် ကြောင်း အမြဲတမ်း ပါလေ့ရှိပြီး user စိတ်ကြိုက် ဒီစနစ်ကို ရပ်တန့်စေ နိုင်ပါ တယ် ။
၇။ website owner များအနေနဲ့ ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိ ဆိုဒ်ကို Subscribe လုပ်သူများ လာ တာနဲ့အမျှ မိမိရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် products များကို အလိုလိုကြေငြာပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ။
RSS ရဲ့အဓိက ဆိုးကျိုးကတော့ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများ နှင့် user များရဲ့ဦးစားပေး အလေးထား စိတ်ဝင် စားမှု့တို့ကို ခိုးယူ၊ ကော်ပီ ခံရမှု့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအချက်များကတော့ ……….
၁။ အချို့ users များမှာ တကယ် update လုပ်တဲ့အရေအတွက်ထက် ပိုပြီး email များ ရောက်ရှိ လာတက်ခြင်း ။
၂။ RSS feed မှာ သက်ဆိုင်ရာ webs များမှ update လုပ်လိုက်သော posts များတွင် ပါဝင် သော ဂရပ်ဖစ်နှင့် ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာများ ဖော်ပြမပေးနိုင်တဲ့အတွက် သတင်းအရသာအပြည့်အ၀ မခံစားနိုင်ခြင်း။
၄။ Publisher များအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အချက်အလက်များကို User မည်မျှက အကြိမ် မည်မျှ ၀င် ရောက် ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတာကို မခန့်မှန်းနိုင်သလို အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ user များမှ ဘာ ကြောင့် unsubscribe လုပ်ကြတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို မသိနိုင် တာပါပဲ ။
၅။ RSS feed စနစ်ဟာ server ပေါ်မှာ traffic rate ကိုမြင့်တက်စေပြီး ..ယနေ့ website တော် တော်များများမှာ RSS စနစ် ပါဝင် လာကြပေမဲ့ RSS ကို supportမလုပ်နိုင်တဲ့ Website များစွာ လဲ ယနေ့တိုင်ရှိနေဆဲပါပဲ ။